Abavelisi kunye nabaThengisi beMask ye-Mask - iTekhnoloji yeChina - iQuanzhou waimaoniu yokuNgenisa kunye nokuThengisa iiRhwebo kumazwe angaphandle, Co, Ltd.
Okokuqala, ngaphambi kokuqinisekiswa kwee-masks, kufuneka uqonde ukubekwa kwemaski:
Imaski yahlulwe yangamacandelo amabini kwi-European Union: Imasks ekhuselayo kunye nemaski yokuhlinzwa; ishishini liqhele ukusetyenziswa ukubhekisa kwiimaski zokhuselo kunye neemaski zonyango.
Izimpawu zokukhusela iMask zibandakanya ezi zinto zilandelayo:
1. Ukusebenza kokucoceka kwebacteria (BFE);
Ukusebenza kokucoceka kwamasuntswana (PFE):
3. Ukumelana nokungena kwegazi okunyanzeliswayo:
4. Umahluko woxinzelelo:
Ezi zimbini zinogxininiso olwahlukileyo. Imasks ezikhuselayo eziphefumulayo zigxila kakhulu ekusebenzeni kokucoceka kwenxalenye, ngelixa iimaski zonyango zigxila kakhulu kukhuseleko lwe-ulwelo kunye ne-splashes zoxinzelelo lwegazi (ukumelana okuphezulu kwegazi ukungena); ngesiqhelo, iimaski zokukhusela ukuphefumla ziba nobhubhani omkhulu. Kuhlala kulula ukuba kunqabile, kwaye ngexesha likaxakeka, iimaski zonyango zinokusetyenziswa njengeyona ndlela isisiseko yokhuseleko lokuphefumla.
Okwesibini, kutheni isitifiketi se-CE semaski?
Iimaski ezikhuselayo ziphantsi kolawulo lomyalelo wokukhusela i-PPE, ngelixa iimaski zonyango ziphantsi kolawulo lomgangatho wezixhobo zonyango zeMDD. Ke ngoko, nokuba iyimaski ekhuselayo okanye imaski yezonyango, isiqinisekiso se-CE siyadingeka ukuze kuthunyelwe kumazwe angaphandle kwi-EU.